Bisha Cas ee Imaaraatka Carabta oo Dardargelisay Afurinta Qaxootiga Yemen ee Bosaso[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Bisha Cas ee Imaaraatka Carabta oo Dardargelisay Afurinta Qaxootiga Yemen ee Bosaso[Sawirro]
Hay’adda Bisha Cas ee dalka Imaaraatka Carabta ayaa dardar kuwada mashruucii afurinta dadka sooman ,waxaana loogu talagalay bishan Ramadaan oo dhan in loo joogteeyo dadkaas afurkooda.
Xerada dadkan ay joogaan ee Boosaaso ayaa shalay waxaa kormeer ku tagay Madax ka socotay Hay’adda Bisha cas ,Guddiga gurmadka qaxootiga ,saraakiil iyo Agaasimaha Ciidanka badda Puntland.
Ujeedada kormeerka ayaa ahaa sidii ay ula socon lahaayeen isla markaana u dersi-lahaayeen qaabka dadka loogu qabto shaqada afurinta taasoo ay si weyn isaga xilsaareen hawlwadeeno loogu talagalay.
Axmed Siciid Qolambi oo wakiil u ahaa hay’adda Bisha Cas ee Imaaraatka carabta ayaa sheegay iney u ballanqaadayaan dadkan ineysan hakad geli doonin gurmadka ay u fidinayaan dadka ka imaanaya dalka Yemen.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Xeradan ay ku suganyihiin 700 qof isla markaana ay u sameeyeen afurin taasoo u sheegay iney balanqaadayaan iney loo sii wadayoBarnaamijka afurinta.
Wuxuu kaloo u sheegay Mudane Axmed Siciid Qolambi in qorshahoodu keliya kueekeyn afurin oo kaliya balse u qabanayaan dadkaas walaalahooda ah wixii ay uqaban karaan oo kale.
Mid kamid ah Shaqaalaha qaabilsan qeybinta Raashinka afurinta ah ee dadkan ayaa Madaxda u sheegay iney uga mahadcelinayaan mas’uuliyiinta booqashadakormeerka ah ay ugu yimaadeen isla markaana shaqadu si dardar leh ku socoto.
Agaasimaha Guud ee Ciidanka Badda Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Xaajiayaa sheegay in uu u mahadcelinayo hay’ada bisha cas ee dalka ImaaraatkaCarabta ,isagoona ka rajeeyey hay’adaha kalena iney ku deydaan.
Bisha cas ee imaaraatka carabta ayaa ballanqaaday bishan Ramadaan inta kadhiman iney u joogteyn doonto afurinta dadka kasoo qaxay dagaalada dalka Yemen waana tallaabo lagu ammaanay.